Firaisana ara-nofo tsy ampy ve no mahatonga ny lehilahy hampirafy?
RAY MAMO LAVA Novonoiny ilay zanany vavikely, norahonany ny vadiny...
Raim-pianakaviana iray monina ao Antsahabary, any Soavinandriana Itasy no voasambotry ny mpitandro filaminana rehefa voalaza fa namono ny vady aman-janany. Mamo lava ity raim-pianakaviana ity raha ny fantatra.
MATHYAS RANDRIAMAMY sy LOIC LAPOUSSIN Barea vaovao
Nivoaka omaly maraina ny lisitr’ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena Barean’i Madagasikara hifanandrina amin’ny ekipan’i Côte d’Ivoire amin’ny volana Novambra izao.
Manala tasy amin’ny ovy, citron…
Maro karazana ny antony mahatonga ny tasy maramara sy ny panda eo amin’ny tarehy. Isan’izany ny masoandro, ny loto miandrona,
“Jus” manaitra filàna amin’ny andro mafana…
Mafana ny andro. Rariny loatra raha somary kamokamo ny mpifankatia hiray ara-nofo.
Laoka matsiro, mahasalama…latsaky ny 3000Ar
Maro be ireo renim-pianakaviana sahirana amin’ny fikarohana izay hatao nahandro isan’andro. Mila ampitoviana tantana amin’ny ho enti-manana koa mantsy ny sakafo tiana ho handrahoina. Amin’ity herinandro ity, andao hihinana sakafo matsiro, mahasalama ary tsy mihoatra ny 3 000Ar
"Astuces" fetsifetsy, mampihena vetivety!
Ankoatra ny fanamboarana ny sakafo dia misy ny paipaika azo atao mba hanamora ny fampihenan-tena atao. Santionany amin’izany ireto :
Big Mj, Abel Anicet : akaikin’ny fon’ny reniny
Misy fomba fiteny milaza hoe : ao ambadiky ny lehilahy iray tafita dia misy vehivavy matanjaka mijoro. Matetika ny vadin’ilay lehilahy no resahina amin’izany izay isan’ny tena manohana azy tokoa,
Fanontaniana maro mpametraka ny hoe inona ny antony mahatonga ny lehilahy hampirafy. Ary nosinganinana manokana ny momba ny firaisana ara-nofo androany. Mifototra amin’ny firaisana ara-nofo tokoa ve ny antony mahatonga ny lehilahy hanandroa? Nanontany ny hevitry ny mpamaky izahay :
Jak (lahy) : Tsy voatery izany no mahatonga ny lehilahy hampirafy. Ny fitiavana, ny tambitamby sy ny fifanajana amiko no mety hahatonga izany raha mahita ireo any an-kafa izy. Raha resaka firaisana ara-nofo tsy atao hampirafesana. Fa io miankina amin'ny tsirairay. ("Il n'y a pas que le sexe dans la vie")
Nofy (vavy) : Fa misy lehilahy na voky hatrany an-tendakely aza ka rehefa tolorana « échine de porc » isan'andro izy dia lasa ilay tsy vanona mbola mandeha misotro ron'akoho etsy Ambodimita ihany
Misa (vavy) : Hoy ilay bandy akama izay hoe « ianao rehefa omena akoho foana isan’andro dia leo ianao fa aleonao ndray mihinana ravimbomanga
Aina (vavy ) : Matetika no alain'ny lehilahy hatao "excuse" hiarovany tena, ary ny tena loza dia heverin'ny fiaraha-monina fa tena mitombina, ilay hoe tsy afaka ny hiray ara-nofo aminy ohatra ny vadiny, dia izay no mahatonga azy mampirafy. Ny fampirafesana raha amiko dia toetra mandeha ho azy fotsiny, tsy ilana antony velively. Rehefa "te hampirafy izy dia mampirafy" fa tsy mila "excuse". Eo anivon'ny fahaizana mi-"assumer" an'ilay zavatra nataony anefa no olany avy eo, satria mitady "excuse" izy, kanefa tena niniany ilay izy.
Jean Berger : Tena tsy misy idirany amin’ny firaisana ara-nofo mitsy Rehefa te hampirafy izy de mampirafy, ilay mampirafy koa aza mbola tsy voatery hoe hisy firaisana ara-nofo. Tsy hoe tsy mila, fa mety tsy hisy firaisana ara-nofo. Satria maninona ? Izay ilay hoe tsy voatery “sexe” no “raison”, mety hoe “écoute”, na tambitamby na tsy haiko.
Tantely (Lahy) : ka efa hoe anisany hoa izany... Raha ilay sipa milonjilonjy be milaza fa marary andoha lava ireny ve tsy aleon’ny bandy mitsaingoka any amin’ny sisiny....mafy aloha zalahy manambady an’ireny e.. (hehy) fa ny vehivavy anie no tena mora mandeha rehefa tsy ampy an’izany ao an-tanàna e... Krkrkkr
Tah (vavy) : Angaha io ampy izany e (hehy). Resaka safidy foana io na lahy na vavy, mba te hanandrana hafa fotsiny